Stamplia: Zụta ma ọ bụ Wulite Template Email Gị Mfe | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị na-achọ mmụọ nsọ maka ndebiri email gị ọzọ, na-achọ ịzụta template email ị nwere ike gbanwee, ma ọ bụ ọbụlagodi iwulite ozi email na-aza site na ncha - ele anya karịa Stamplia.
Ha na-enye ọtụtụ akwụkwọ akụkọ dị ọnụ ala ma mara mma, ozi ịntanetị azụmahịa, yana ọbụlagodi nke dị njikere ịga. Magento, PrestaShop azụmahịa, mgbasa Ozi Nyochaa or Mailchimp. Onye ọ bụla n'ime ndebiri email ahụ nwere nkọwa nkọwa, atụmatụ, ma nwalee ya n'ofe tọn ndị ahịa.
Na-anabata Email Template Nrụpụta
Ha siri ike dọrọ na dobe onye na-ewu ụlọ dịkwa egwu! Ọ bụrụ n’itinyela ihe ndebiri site na ncha, ị maara etu o siri sie ike iji hụ na ị na-azaghachi ya mgbe ị na-eleba anya na plethora nke ndị ahịa email nọ ebe ahụ!
A bụ ihe a video na-egosi otú mfe ihe Stamplia ikpuru na dobe editọ bụ… ha nyekwara ndebiri 5 ka ịmalite ka ịgaghị arụ ọrụ site ncha.
Tags: chepụta ndebiri emailemailemail onye na-ewu ụlọemail ndebiristamplia